Nkọwapụta Ahịa 2020 na Tredị |kpụrụ | Martech Zone
Dika ihe ohuru na ntughari na teknụzụ na-aga n'ihu, ohere dị oke ọnụ maka azụmaahịa mpaghara iji wulite mmata, achọta ma ree n'ịntanetị na-eto eto. Ndị a bụ usoro 6 nke m na-ebu amụma ga-enwe nnukwu mmetụta na 2020.
Maapụ Google Ga-aghọ Nchọta Ọhụrụ
Na 2020, nyocha ndị ọzọ ga-esite na Google Maps. N'ezie, na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa ga-agafe ọchụchọ Google kpamkpam ma jiri ngwa Google na ekwentị ha (ntụgharị Google Maps) iji chọọ azịza nye ajụjụ ha. Ọzọkwa, ndị ahịa na-eji Google search ga-ahụkwu ihe atụ nke nchọta ngwaahịa na-eweghachi nsonaazụ map. Dịka ọmụmaatụ, ịchọ AirPods nwere ike ịpụta Apple Store, Best Buy na Target map listings with an dị na ngwaahịa akara nke Ngosiputa Ngwaahịa nke Mpaghara Google.
AI Ga-amalite Na-eche Echiche Dị Ka Gị
Nnyocha na-atụ aro na ịrị elu dị ka teknụzụ AI na-abawanye na nghọta. Ndị ahịa agaghịzi eche echiche site na ngwa ọrụ nke ịrụ ọrụ, ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịga njem - sọftụwia na-agbanwe ga-abụ otu ụzọ tupu ihe ndị chọrọ na mkpa ha.
Zero-Pịa Nchọgharị na Uptick
Google si rịzọlt rịzọlt nchọta ga-anọgide na-ebelata mkpa ọ dị ndị ahịa ịga leta weebụsaịtị ndị ọzọ maka ozi. Na azịza ozugbo, Map Packs, ndị ntụgharị, ogwe ihe ọmụma, calculators na nkọwa akọwapụtara na elu nke ibe ahụ, Google ga-agbakwunye ndị ahịa na SERP, na-eme ka ọrụ ya dị ka eze data. Nakwa atụ anya ịchọta nsonaazụ kacha elu dị na peeji nke dịka ntuziaka, usoro nri, otu-tos, menus na ndị ọzọ gụnyere foto, vidiyo na ọdịnaya ndị ọzọ bara ọgaranya.
Ọ bụrụ na / mgbe Amazon bidoro iwepụta peeji nke akwụkwọ Google, ọ ga-enye ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ha ikike iweghachite njikwa profaịlụ ụlọ ọrụ ha, aha ha na data ha ozugbo na saịtị Amazon. Agbanyeghi na enwere ike ihu ya dika ebe ahia e-commerce, nzụta Amazon zuru oke nke Ahịa Ahịa na-egosipụta mgbasawanye ya na ntanetị dị iche iche nwere ike ọhụụ. Na-atụ anya ka mgbalị ndị a gbasaa na 2020.
Brick & ngwa agha anwughi
Brick na ngwa agha na-alaghachi azụ, mana n'ụzọ dị iche karịa otu mmadụ nwere ike ịtụ anya. Dika otutu uzo ahia na enweta site na ulo ahia ha, ha g'aga n'ihu na emeghari onwe ha ka ha na ario ndi ahia ka ha choo ha ka ha di ha aka. Na 2020, na-atụ anya ụlọ ahịa brik na ngwa agha na ụlọ oriri na ọ theirụ restaurantsụ ka ha belata ebe ha dị, na-elekwasị anya na echiche nke ga-eme ka ndị ahịa nwee mmetụta ma nyere ha aka ịpụ n'egwuregwu ahụ.
Icskpụrụ omume, Nzuzo na Mkpebi Ọha Ga-emetụta Azụmaahịa
Ma ọ bụ ozi ọma ma ọ bụ ngwaahịa CBD, isi teknụzụ ntanetị dịka Youtube na Facebook ga-ahọrọ otu akụkụ ma a bịa n'ịkwado, ịkwalite ma ọ bụ ịkwado ụlọ ọrụ, mkpọsa ma ọ bụ ngwaahịa. Site na ike ịgbanwe ndepụta algọridim, mee ka mmachi na / ma ọ bụ kwalite ụfọdụ ngwaahịa / echiche ndị ọzọ, ndị ọrụ ntanetị a ga-elebara anya na ọrụ ha na ịgbasa ozi - ma ọ bụ ụgha ma ọ bụ naanị esemokwu - na mmetụta ọ na-enwe na ndị na-azụ ahịa . N'otu aka ahụ, 2020 ga-ahụ nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ ka ha na-ewepụta atụmatụ ndị ọzọ na-echekwa ihe nzuzo - dị ka ọnọdụ ọhụrụ nke Google Maps - ịbelata ịkekọrịta data ọnọdụ ndị ahịa na ụdị iji chebe nzuzo nke ndị ahịa.
Tags: nkọwaụkpụrụ omumeozi ọmagoogle apsgoogle mapechiche ọha mmadụaro ọchụchọserpsDum Foods Marketefu-pịa
Mick Wilson, Onye isi oche nke Onye Ahịa Ahịa na Rio SEO. Mick bụ ọkachamara n'ịzụ ahịa mmekọrịta nwere afọ 15 + na ahụmịhe dijitalụ, CRM na azụmaahịa mpaghara. Ọ na-eduga ndị otu na-eme nke ọma na ndị ahịa na Rio SEO, yana ya na ụlọ ọrụ ahụ kemgbe mmalite ya.
Ihe omuma ndi ahia na oge dijital